Monday, 21 Sep, 2015 10:52 AM
दिल्लीका ख्यातिप्राप्त वकिल प्रभजीत जौहरका अनुसार सहरमा त मानिसहरु आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीविरुद्ध प्रमाण जुटाउन जासुस समेत राख्ने गर्दछन् । तस्वीर, मोबाइल डाटा, टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड, यसका वावजुद आरोप सावित गर्न कठिन छ । त्यसैले न्यायाधीशहरु परिस्थितिजन्य प्रमाणको भरोसा गर्दछन् ।
जौहर भन्छन्–एउटा मुद्दामा दिल्ली उच्च अदालतले विवाहेत्तर सम्बन्धको आरोप स्वीकार गर्दै भनेको थियो कि यदि एक महिला र एक पुरुष एउटै कोठामा फेला परे भने निश्चित रुपमा उनीहरु बाइबल पढिरहेका हुने छैनन् । अर्को एउटा मुद्दामा अबेर राति एक महिला कुनै पुरुषसँग गरेको कुराकानीलाई अदालतले विवाहेत्तर सम्बन्ध मानेको थियो ।
कनिमाझीसँग सम्बन्धित वकिलले बीबीसीलाई बताए अनुसार यो पूर्ण रुपमा सावित भएको छैन कि उनको विवाहेत्तर सम्बन्ध थियो ।
यो फैसला यस अर्थमा पनि ठुलो प्रभाव हुनेछ । किनभने न्यायाधीशले आफ्नो आदेशमा जोड दिएर भनेका छन् कि सम्बन्ध विच्छेदपछि यदि कुनै महिलालाई गुजारा भत्ता आवश्यक छ भने उनले यौन अनुशासनको पालना त्यही प्रकारले गर्नुपर्नेछ जस्तो कि उनले वैवाहिक सम्बन्धका क्रममा गरेकी थिइन् ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ–अन्य शब्दमा, वैवाहिक सम्बन्ध निर्वाह गर्दै पत्नी विवाहेत्तर सम्बन्ध बनाउन सक्दैनन् । र, यदि उनले त्यसो गरेको खण्डमा उनले आफ्नो श्रीमानबाट गुजारा भत्ता पाउने अधिकार गुमाउछन् । यसरी नै सम्बन्ध विच्छेदपछि पनि यदि उनले यौन अनुशासनका पालना गरेकी छन्, जुन उनले वैवाहिक सम्बन्धका क्रममा राखेकी थिइन्, त्यस अवस्थामा मात्र उनले गुजारा भत्ता पाउने अधिकार पाउँछिन् । यदि त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा उनी गुजारा भत्ताको अधिकार गुमाउँछिन् ।
यता सामाजिक कार्यकर्ताहरुले भने यो फैसलालाई गलत मानेका छन् । सामाजिक कार्यकताृ कविता कृष्णन भन्छिन्, यो एउटा कुरा हो कि विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्नुको अर्थ गुजारा भत्ता गुमाउन होइन, तर, सम्बन्ध विच्छेदपछि यही परिभाषाको कुरा गर्नु पूर्णरुपमा अलग कुरा हो ।
उनले भनिन्–न्यायाधीशले भने कि कुनै पनि महिलाले उक्त व्यक्तिसँग मात्र गुजारा भत्ता माग्न सकछन् जसका साथ सम्बन्ध छ । तपाई यौन सम्बन्धलाई गुजारा भत्तासँग कसरी जोड्न सक्नु हुन्छ ? के अदालत यसो भनिरहेको छ कि तपाई त्यो व्यक्तिसँग पैसा लिनुस जोसँग सुत्नुहुन्छ ?
उनका अनुसार यो स्पष्ट रुपमा पितृसत्तात्मक र सेक्सिस्ट विचार हो । जसलाई बढावा दिइदै आएको छ। मलाई लाग्छ कि मसँग यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनो दिने बलियो आधार छ। एजेन्सी